Uma ungafuni overpay amanzi ashisayo, okuyinto ngokuvamile babekhonza ngokulambisa efudumele ompompi, nje ufake gas okokubilisa AGV futhi bajabulele izinzuzo impucuko. Hhayi-ke, uma umnikazi wendlu yangasese, amanzi kubhayela uyisidingo ngawe! Kuyini ewusizo ngakho futhi Kubiza malini?
Kuyini kubhayela AGV?
AGV-boilers ihlukaniswa ezizimele amanzi igesi heater, okuyinto ukufuthelana imizuzwana embalwa emanzini abanda kakhulu kuma-70 degrees Celsius. Yiqiniso, e uketshezi enjalo singeke ageze kahle noma ngisho ukugeza izitsha, ngakho ngamunye amadivayisi AGV (kuhlanganise boilers) kuyinto Regulator ekhethekile, futhi kwamanye onobuhle ngisho sibonise izinga lokushisa. Eqinisweni, lolu phiko kuyinto boilers analog electronic, okuyinto futhi isebenze njengophawu Ukushisa namanzi ashisayo supply.
Yiziphi izinzuzo zayo?
Shono kudivayisi elikhona cishe njalo efulethini yesibili futhi womzalwane, ngoba, okokuqala, AGV-boilers kulula kakhulu ukufinyelela kuwo futhi ngesikhathi esifanayo okunokwethenjelwa amanzi ashisayo kusukela ukuphumula, kuhlanganise boilers. Okwesibili, la mathuluzi kuhluke izindleko zabo ukonga ngoba amanzi bafudumale. Cishe unyaka okusebenzela kubhayela enjalo uzokhokha for ngokwalo ngokuphelele. Ngisho noma futha kwegazi uzoba khona amalungiselelo, ukusetshenziswa kwamandla ngeke idlule 34 kW ngenyanga. On igesi izindleko yeningi kakhulu. Okwesithathu, boilers AGW nhlobo esizimele ugesi. Yiqiniso, uma kungekho futha circulating. Futhi njengoba iningi ezinjalo onobuhle emakethe Russian, ngisho nalapho engekho yokukhanya, ngeke ulahlekelwe amanzi yakho ashisayo. Futhi ekugcineni, ezizimele igesi heater kukhona elula kakhulu futhi ezishibhile ukuze silondoloze.
lisebenze ngamunye igesi inezinkinga zayo. Futhi AGV-boilers babe iyathinteka. Phakathi bokwenza eyinhloko lezi heater amanzi Kuyaphawuleka yobukhulu bawo. heater okunjalo ithatha cishe 1 imitha cubic isikhala, ngakho ukusebenza kwawo okuvamile ayacelwa ukwaba bakha ingxenye enkulu yabamemezeli ekhishini noma yimuphi omunye ikamelo. Nokho, ngesikhathi esifanayo kuyafaneleka ukuthi eminyakeni yamuva emakethe Russian yaqala ukubonakala odongeni-agibele amahhashi igesi amayunithi ukuthi kukhona icwecwe okungaphezu phansi zakudala.
futhi omunye yokuntuleka ukusetshenziswa kwedatha kubhayela - isidingo ukusebenzisa ezinkulu-ububanzi amapayipi, okuyinto ngcono nje kuphela ukuklanywa kwayo izikhala ingaphakathi, kodwa futhi kakhulu ube mude inqubo amalahle amanzi ohlelweni.
Izindleko isilinganiso lezi heater amanzi kuyinto ruble ecishe ibe yizinkulungwane 20-25. Kulokhu, lo boilers eshibhe abiza ecishe ibe yizinkulungwane 10-11. Yiqiniso, nge liyigugu abakwazi ukunikeza isiqinisekiso 100 amaphesenti kokuhlinzwa yabo lengenamaphutsa. Kodwa kwedivayisi kwamanethiwekhi ayizinkulungwane 60 luyatholakala kakhulu intengo yayo ububanzi izakhamuzi ezivamile, ngakho uma ukhetha kufanele aqondiswe kokubusa "kusho osemqoka".
Electric emoyeni kwesihenqo: amathiphu wokukhetha kanye nokubuyekeza. I yokuntula main amakhethini kagesi
Cashew: izinzuzo efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Mississippi (River): incazelo, kuvetwa kwebalingisi nemingenela ka omunye wemifula emikhulu kakhulu
Toning imisipha besisu: 25 umzimba umhlabeleli
Ukukhishwa okufakiwe C10: izici zobuchwepheshe, isisindo, ubukhulu, isicelo
Yelaphani sinusitis: Ukwelashwa Ngempumelelo